TTSweet: မွေးနေ့ မှတ်စု (သို့) မိတ်ကပ်မှတ်စု ...
စလုံးမှာတုန်းက ဘာမိတ်ကပ်သုံးတာလဲ တီတီဆွိ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပြောပြပေးပါလား။
T T Sweet February 16, 2014 at 2:59 PM
This is nothing special as usual sis. I bought from one of the shopping centre from S'pore. One brand can fit for one person, but may not be for the other. But if you want to try please write me sweetee2008@gamil.com. Thanks for your comment sis.
Thanks TT Sweet for your explanation and concern.
Anonymous February 16, 2014 at 4:27 PM
ဓာတ်ပုံနောက်ခံက အန်တီဆွိ ရွေးတာလား..အမျှော်အမြင် ရှိတယ်..
နောက်ခံက အုတ်နီခဲရောင် ဆိုတော့ မျက်နှာ နည်းနည်း နီ နေရင်လည်း သိပ်မသိသာဘူး..
ဆွဲကြိုး အပေါ်နဲ့ အောက်ကလေးလောက်ပဲ သိသာတယ်..
Happy Birthday, Aunty Sweet!!
T T Sweet February 17, 2014 at 10:24 PM
နောက်ခံက ရွေးတယ်ရယ်လဲ မဟုတ်။ အိမ်ရှေ့က အပင်လေးတွေ ရှေ့မှာ ရိုက်လိုက်တာပါ။ မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဆိုပြီး ဘာရယ်မဟုတ်။ Thanks for wishes. Same to you.
Hal par tal A!
Anonymous February 16, 2014 at 9:23 PM
Sorry, Hla Par tal A.
Anonymous February 17, 2014 at 4:17 AM
သတိရလို့ ထုတ်ကြည့်တော့ သံချေးတွေပြန်တက်နေပြန်ရော။
မီးကင်တာမနာလို့ နဲ့ တူတယ်။
အုိုး...မေ့တော့မလို့ ...ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ပေါင်းများစွာချစ်သောသူများနဲ့ ဆင်နွှဲနုိုင်ပါစေလို့ ....
T T Sweet February 17, 2014 at 10:19 PM
ဒယ်အိုးကို ချက်ပြီးပြီးချင်း ရေဆေး တစ်ရှုးလေးနဲ့ သုတ်၊ ပြီးတော့ ဆီလေးထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ် ၁မိနစ် ၂မိနစ်လောက် ပြန်တည်ထားလိုက်တယ်။ ဆီကို အနှံ့ရောက်အောင် ဒယ်အိုးကို စောင်းပြီး လှည့်ပေးသေးတယ်။ သူ့ အညွှန်းမှာလို ၁၀မိနစ် ၃ခါ ထက်တော့ သက်သာတာပေါ့ အိုင်အိုရာရေ့။ Thanks for BD wishes. I wish for you too.
Adora etc. February 17, 2014 at 12:58 PM
Adora etc. February 17, 2014 at 12:59 PM
ပထမဆုံး ပျော်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်အမရေ။
Adora ကတော့အမလိုမဟုတ်ဘူးတော့။ တံဆိပ်မျိုးစုံ စမ်းသုံးကြည့်တာပဲ။ သိပ်ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် ပြန်ဝယ်။ မကြိုက်ရင်အသစ်တခုပြောင်းလိုက်ရော။ သတိထားမိတာကတော့ L'oreal အောက်က Skin care make up brands တွေနဲ့ဆိုအကုန်အဆင်ပြေတယ်.
pls use sunscreen TTsweet. your skin lookalittle bit changed more to brown. If i am wrong, sorry for that. May you be happy, healthy and till 100 years age of birthday celebration!
T T Sweet February 17, 2014 at 10:22 PM
ဒီမှာ နွေရာသီက အရမ်းပူလို့ နေနဲနဲလောင်တာဖြစ်မယ်။ sunscreen တော့ လိမ်းရတာ မကြိုက်လို့ မလိမ်းဖြစ်တာ အမှန်ပဲ။ ဆောင်းကျရင်တော့ ပြန်ဖြူလာမှာပါ။ သမီးဆို ညိုရတဲ့အထဲ ပိုတောင်ဆိုးသေး။ Thanks for BD wishes. I wish for you too.
Aunty Tint February 17, 2014 at 8:41 PM
ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဆွိတီ.....
T T Sweet February 17, 2014 at 10:27 PM
ကျေးဇူးပါပဲ တီတင့်ရေ။ ဖေ့ဘွတ်ကနေ ဟင်းပုံတွေ များများတင်ပေးနော်။
Sonata Cantata February 17, 2014 at 9:31 PM
Happy Birthday TTSweet
T T Sweet February 17, 2014 at 10:26 PM
ကျေးဇူပဲ အစ်မ မသီတာရေ။ သားလေးတွေနဲ့ အကိုကြီး ကို ဧရာ ရော နေကောင်းကြပါရဲ့လား။